Iintlungu ezifanayo zokuthengisa nge-imeyile ... Iminyaka eli-10 kamva. | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 18, 2011 NgoLwesine, Septemba 19, 2013
Ndibethe indlela kwiveki ephelileyo ukuya kutyelelo lwe UDelivra umxhasi kwaye uthethe kwifayile ye- UMbutho weNtengiso umcimbi e Providence, RI. Into endiyifundileyo yile… abathengisi be-imeyile baneengxaki ezifanayo abazenzayo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ukuqala kwam ukuthengisa. Ngaphandle kokuqhubela phambili kwetekhnoloji kunye nokwamkelwa, abathengisi bokwenyani bayasokola yonke imihla ngeendlela zokwenza uluhlu, ukuzibandakanya, ukulinganisa, ukuhanjiswa, amaxabiso avulekileyo kunye nezinye iindlela ezisisiseko ze-imeyile. Bendikwiphaneli emalunga nezicwangciso-qhinga zokwakha uluhlu kwaye igumbi lazaliswa… igumbi lokuma kuphela!
Iindaba ezimnandi, xa kuthelekiswa nalapho sasikhona kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, kukuba kukho ubutyebi obuninzi bolwazi, amanani kunye nobungcali bokunceda ukusombulula ezi ngxaki. Rhoqo kunoko, into endiyifumeneyo kukuba abathengisi be-imeyile banobuqili, banengqondo ngokwenene. Banolwazi kunye nesicwangciso sokwenza imikhankaso emikhulu ye-imeyile; bafuna nje izibonelelo ezingcono nokuba ingaba yimali, abasebenzi okanye ixesha.
Ndinomdla wokufumanisa kweli qela… yeyiphi eyona miqobo ijongene neenkqubo zakho ze-imeyile? Injalo:
Yila i-imeyile enobubele